Baarlamaanka Puntland oo magacaabay afar kamid ah guddiga doorashooyinka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomePuntlandBaarlamaanka Puntland oo magacaabay afar kamid ah guddiga doorashooyinka
Baarlamaanka Puntland oo magacaabay afar kamid ah guddiga doorashooyinka
August 14, 2019 Puntland Mirror Puntland 0
Guddoonka baarlamaanka Puntland. [sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah magacaabay afar kamid ah guddiga doorashooyinka Puntland, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday xafiiska afhayeenka baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo.
Magacyada afarta xubnood ayaa kala ah:
1. Guuleed Saalax Bare
2. Jaamac Xirsi Faarax
3. Xafso Salaad Maxamed
4. Cabdirisaaq Axmed Siciid
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ka kooban sagaal xubnood, shanta kale ayaa la filayaa in dhawaan uu soo magacaabo madaxweynaha.
Dabayaaqadii bishii June ee sanadkan, guddigii hore ee doorashooyinka Puntland ayaa xilka iska-casilay kadib iyaga oo aan qaban wax shaqo ah oo muhiim ah tan iyo markii la magacaabay sanadkii 2016.
Guddiga doorashooyinka Jubbaland oo mudeeyay in 19-ka Agoosto ay dhici doonto doorashada madaxweynaha
Five Somali soldiers killed in Al-Shabab attack against army base in Awdhigle
Somali pirate kingpin killed in Mudug region
Galkayo-(Puntland Mirror) Ahmed Mohamoud Mohamed, popularly known as Garaad, who was one of the Somali pirate kingpin was killed in Mudug region on Monday, his relatives and police said. Garaad was ambushed and killed by [...]
Madaxweynaha Puntland oo magacaabay agaasimaha Haayada Socdaalka iyo Jinsiyadaha Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magacaabay agaasimaha Haayada Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Puntand, sida lagu sheegay digreeto maanta oo Axad ah kasoo baxday xafiiska madaxweynaha. Maxamed Faarax “Qambi” ayaa madaxweynuhu u magacaabay [...]
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay koonfurta Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shalay oo Arbaco ahayd dilay ugu yaraan saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah, kadib markii ay howlgal wadajir ah oo ka dhan [...]